Nahoraka Ampefy tamin’ny fandraisana an’i Neny – MyDago.com aime Madagascar
Nahoraka Ampefy tamin’ny fandraisana an’i Neny
Rehefa avy nitsidika an’i Moramanga dia nihazo an’Ampefy, distrikan’i Soavinandriana ao anatin’ny faritr’ Itasy ny delegasiona mafonja notarihin’i Neny Lalao Ravalomanana. Nahitana an’ny Praiministra Lefitra Botozaza Pierrot, ny filoha lefitry ny filankevitra ambonin’ny tetezamita Hanitra Razafimanantsoa, ny ministry ny fambolena Roland Ravatomanga, ny minisitry ny varotra Olga Ramalason, ny minisitry ny fiompiana Ihanta Randriamanjato, ny mpikamba ao anatin’ny CST sy CT vitsivitsy. Tao amin’ny efitra mamalaky ny hotely Kavitaha no nanaovana ny lanonana. Ny kabary rehetra nifandimby dia samy nanome toky an-dRamatoa Lalao Ravalomanana amin’ny fifidianana ho avy izao fa hahazo ny salan’isam-bato be indrindra amin’ireo faritra rehetra manerana ny Nosy ny faritra Itasy.
Niditra mivantana teto ihany koa ny filoha Ravalomanana Marc nitondra ny heviny mahakasika ny fiainam-pirenena. Nandritra ny dimy taona izay dia nijaly ny vahoaka Malagasy, tsy fantany izay alehany, tsy fantany izay olona afaka hamonjy azy, very fanahy mbola velona ny vahoaka Malagasy hoy ny filoha Ravalomanana. Tonga ity ny fotoana hahafahanareo hisafidy ny olona hiara-hiasa aminareo. Tonga miaraka no fanombohana ary ny miasa miaraka no fahombiazana. Rehefa mandresy i Neny dia mandresy isika hoy hatrany ny fanazavany. Asehoy fa miray hina ny zanak’i Neny sy ny zanak’i Dada , tsy maintsy averintsika ny fampandrosoana efa nisy teto, tsy maintsy averintsika ny ara-dalàna hoy ny filoha Ravalomanana. Aza matahotra ianareo fa tsy hamela anareo irery izahay, hataontsika izay hamerenana haingana ny firenena ao anatin’ny fandrosoana , ho jerentsika ny ady atao amin’ny valala hoy hatrany ny tenanany. Ataovy modely amin’ny faritra rehetra ianareo eto Itasy hoy izy namarana ny kabariny.
Raha nandray fitenenanana kosa Ramatoa Lalao Ravalomanana dia nahatsapa ny hamafin’izao fiainana iaianan’ny Maagasy izao. Efa henoko daholo ny maharary anareo hoy izy, efa ity i Neny hijoro sy vonona hanangana ny firenena vanona hoy izy. Nohariny amin’ny fitantananana ny tokantrano ny firenena teto. Rehefa ny reny no mikarakara ny tokantrano dia milamina fiainana. Rehefa ny reny no miahy ny ankohonany dia ho voky maharaka ny namany isika, hanana vatana tomady sy salama ny Malagasy rehetra hoy izy. Rehefa tapitra moa ny kabary dia nijery ny fiaraha-mihira nataon’ny randran-telo i Neny sy ireo delegasiona niaraka taminy. Efa tonga eto Bongolava moa ny delegasiona izao ka ho taterina eto hatrany ny vaovao.
Ho avy hanasoa ny mpiara-belona no anton-dian’i Neny !
RAVALOMANANA MARC : Rehefa mandresy i Neny dia mandresy isika !
FILOHA RAVALOMANANA MARC : NITONDRA NY HAFATR’I NENY LALAO RAVALOMANANANA HO ANY VEHIVAVY
Auteur Solo Razafy*Publié le 21 juin 2013 21 juin 2013 Catégories Politique
3 réflexions sur « Nahoraka Ampefy tamin’ny fandraisana an’i Neny »
La France veut repésenter le monde à ,Madagascar son but ,on le sait.La France veut imposer son point de vue sur la situation à Madagascar sur les états des pays du groupe de contact ou le GIC.
La France veut imposer le retrait de Lalao Ravalomanana et de 2 autres candidats de la présidentielle ,….
Donc Urgent ,il faut agir vite et fort, tous les malgaches à tous les niveaux pour bloquer cette idée infantilisatrice de la France.
il faut dire que la Chine et les UA ont d’autre point de vue que cela.
21 juin 2013 à 14 h 55 min
Maro be ihany koa ny vahoaka tonga nihaino an’ny kandidà-n’ny mpiaro ny ara-dalàna !
Mahafinaritra ny nahita an’ireo mpandihy sy mpihira-gasy ! Mbola eny an-koditry ny ankizy koa ny tablie maitso !
Ary tsy mba afaka manohana amin’ny alàlan’ny « pétition » daholo ve, ireny olona aman’alina nihaona tamin’i Ramatoa ravalomanana ireny ê ?
21 juin 2013 à 17 h 03 min
Mandroso ny dia ry Neny ary manohana anao foana na dia i Dada aza no tena tohanako, satria mino aho fa tsy hitanao izay tsy mahamety ilay tetik’asa Madagasikara AmPerin’asa na ny MAP.
Ary tena zato isan-jato @ Dada milaza hoe : « Rehefa mandresy i Neny dia mandresy isika ». Izany hoe manantena antsika ao anaty vahoaka ny filoha fa isika no hamerina azy @ alalan’ny fifidianana an’i Ramatoa Lalao Ravalomanana. Ka dia aoka isika rehetra samy hisoratra anarana any @ fokotany sy hampilazana ny namana hanao izany. Ary koa hanara-maso akaiky ny fikarakarana ity fifidiana ity. Aoka hihezaka isika Malagasy @ fampandresana an’i Lalao Ravalomanana. Mitaky asa sy hetsika izany. Ary indrindra ny fanaovana izay tandrifin’ny tsirairay avy.
Précédent Article précédent : Lalao Ravalomanana : nahazo tso-drano tao Moramanga
Suivant Article suivant : LALAO RAVALOMANANA : Nanome fanampiana ny Akany Arc en Ciel